TAMAANDHIGA "DHUNKASHADA GERANIUM": SHARAXAADDA KALA DUWANAANTA, SIFEYNTA IYO AGROTECHNIK EE BEERITAANKA, DARYEELKA IYO BEERAHA KA DAMBEEYA YAANYO (SAWIR) - NOOCYO YAANYO
Sida loo abuuro iyo u koraan yaanyo "Gacanium dhunkasho"
Qaar ka mid ah yaanyada dhirta, sababtoo ah waxay jecel yihiin inay cunaan midhihiisa oo ay wax ka cunaan waxyaabo kala duwan. Qaar kale ayaa ah kuwa beeraha yaanyo ku shaqeeya oo leh xirfad iyo farxad ka soo jeeda geedi socodka koritaanka noocyo kala duwan. Kuwa iyo kuwa kale waxay xiiseynayaan waxyaabaha cusub ee adduunka ku yaryar, si ay u beertaan sariirahooda. Maqaalkani wuxuu soo bandhigayaa noocyo kala duwan oo ah "Kiss geranium", kaas oo rafcaan u leh dhammaan dadka jecel yaanyada. Waxaa la bilaabay America dhawaan, 2008, laakiin horay u suurta gashay inay soo qabtaan qosolka badan.
"Dhunkashada Geranium" waa mid ka mid ah wakiilada noocyada kala duwan ee Cherry iyo si fiican u koraa beerta iyo in lagu koriyo. Waa noocyo hore u bislaaday: waxay ku koraan jawi diiran saddex bilood ka dib soo bixitaanka caleemaha. Tamaandho waa arrin go'aamin ah, taas oo ah, koritaankeedu wuu xadidan yahay wuxuuna istaagayaa marxalad gaar ah.
Yaanyada kale ee hore u bislaaday waxaa ka mid ah: Samara, Alsou, Caspar, Batanyan, Labrador, Troika, Vzryv, Bokele F1, Zemlyan, Tolstoy f1.
Sida noocyo badan oo kale, kala duwanaanshahan waa gaaban yahay. Goobta furan, dhererkeedu waa 50-60 cm, iyo aqalka dhirta lagu koriyo waxay u kala bixin kartaa ilaa 1-1.5 m. Caleemaha qafiifka ah ee cagaarka cagaaran waxay u eg yihiin kuwa baradhada. Caleenta qulqulaya oo sii kordhaya waxay siinaysaa duurka si fiican oo muuqaal fiican leh. Warshad kasta waxay soo saartaa qiyaastii shan burush, taasoo ka kooban ilaa 100 ubax. Dhiigga oo huruud ah, buraashu waxay la mid yihiin taageerayaal caan ah, ka dibna waxay u rogaan kooxo farabadan oo leh kubado casaan ah. Marxalad kasta oo horumar ah, Geranium Kiss waxay u muuqataa mid aad u qurux badan, sidaa daraadeed digaaga xarriiqa ah waxaa laga heli karaa ma aha oo kaliya beeraha khudradda, laakiin sidoo kale ubaxyada ka mid ah ubaxyada, dheryaha daaqadaha daaqada iyo loggias.
Inkasta oo tayada cusubi ay tahay mid cusub, haddana durbadiiba waxaa jira taageerayaal badan oo ka tagaya dib u eegis wanaagsan. Dhibaatooyinka weli lama yaqaan.
Laga soo bilaabo noocyo kale oo ah "Kiss Geranium" waxay kala saaraan faa'iidooyinka soo socda:
aan qabyo ahayn iyo sahlanaanta daryeelka, maadaama ay duurka u yar yihiin uma baahna inay kor u qaadaan oo ay taageeraan;
Farshaxnimo, maadaama ay si fiican u koraan aqalka dhirta lagu koriyo, beerta, beerta ubaxa iyo dheryaha ubaxa ee guriga;
dhalidda sare - illaa 100 miro oo leh hal burush;
dhadhan fiican ee yaanyada iyo qaababka ay isticmaalaan;
caabbinta cudurada "yaanyo" intooda badan.
Kinshipka leh yaanyada cherry waxaa si cad u muuqda muuqaalka midhaha "dhunkashada Geranium". Kuwani waa kubbado yaryar (oo aan ka badnayn walnut) midabka cas, miisaankoodu wuxuu ka bilaabmaa 20 ilaa 40 g. Waxay ka duwan yihiin johanneselka sanka fiiqan, waxaa jira dhowr miraha saxarka. Dhadhanka yaanyada waa macaan, arjiga waa mid caalami ah: waxay yihiin dhadhan fiican oo cusub iyo qaabka qasacadaysan.
Darajada "Geranium Kiss" waa mid miro dhal ah. Burbur kasta wuxuu soo saaraa qiyaastii shan burush, kuwaas oo ku xiran 60-100 miraha. Dhamaantood waxay u bislaadaan si isku mid ah. Beeraha tayo-yaqaanka ah ayaa lagu talinayaa in aan la sugin bisaylka buuxa, laakiin si loo yareeyo yaanyada oo dhan oo aan qaan gaadhin, midab madow.
Fiiri noocyada ugu sarreeya ee yaanyada ee yaanyada.
Tamaandhada si fudud ayaa loo qaadaa iyada oo aan laga badin bandhigga, laakiin lama kaydin waqti cusub muddo dheer waxayna bilaabaan inay sii xumaadaan.
Gadashada geedo diyaar ah, waxaad u baahan tahay inaad taxadar badan sameyso markaad doorato. Buundooyinka waa in ay ahaadaan kuwo xoog leh, oo leh xididada cufan. Sidoo kale waa muhiim in ubaxyada ugu horreeya ay u muuqdaan iyaga. Buundada aan lahayn hal ubax ma aysan weli noqon mid xoogan oo aan u dulqaadan doonin walwalka isu-tallaalidda iyo isbedelka cimilada. Geedo beeray horraantii dhulka, waxay si tartiib ah u kobcin doonaan ama u joojinayaan wadajirkan.
Yields ayaa saameyn ku leh dhulkii yaanyada la beeray, oo dhunkashada Geranium maaha mid gaar ah: wuxuu jecel yahay bacrin, dabacsan. Carrabku waa inuu noqdaa mid dhexdhexaad ah ama waxoogaa acidic ah, oo leh heer pH ah oo aan ka badnayn 5-7. Haddii dhulka dhulku uu yahay mid liitay, maqnaansho iyo cufan, waxaa loo karin karaa adiga keligaa. Qaabka ugu fiican ee ciidda: humus, peat, ciid webiga iyo dhulka caleen.
Waa faa'iido leh in la ogaado muhiimada aysidhka carrada ee dhirta iyo sida loo go'aamiyo guriga.
Aad bay muhiim u tahay in la beero tamaandhada, oo ay ku jiraan "dhunkashada Geranium", ka dib markii khudradda cagaarka ku haboon. Dhaqannada ka dib oo aad ku beeri kartaa yaanyada: kaabajka (casaan, casaan iyo cadaan), bocorka, zucchini, squash, qajaarka, dabacasaha, xididdo, gego, basasha cagaaran. Kuwa ka soo horjeeda ee aan la aqoon waxay yihiin habeenkii (yaanyada, baradhada, basbaaska, eggplants) iyo digir.
Waa muhiim! Waad ku badin kartaa bacriminta, haddii ciidda ay tahay mid bacrin ah. Seeds marxaladda hore ee biqilka uma baahnid tiro badan oo macdanta ah.
Ka hor inta beerto, ciidda waa in la diyaariyaa, taas oo ah, jeermiska. Tan waxaa lagu sameyn karaa siyaabo dhowr ah:
si loo xoojiyo dhulka la diyaariyey;
ku shub substrate leh xal of potassium permanganate (3 g halkii 10 l oo biyo ah), ka dibna ula dhaqmo wakiilada antifungal;
Ku shaqeyn 45 daqiiqo.
"Dhunkashada geraniums" waa warshad thermofilic ah. Hawada iyo ciidda waa inay ahaadaan kuwo kulul, geedo waa la beeray marka heerkulka habeenku uusan hoos u dhicin + 15 ° C. Xaaladaha dabayaaqada xagaaga qaboobaha waxaa fiican in duurka loo daboolo habeenkii ama si hore loogu beero aqalka dhirta lagu koriyo. Qodobka tamaandhada waa in si wanaagsan loo iftiimaa qorraxda. Waa suurad wacan in xididada aysan kululeyn. Si ay dhulka ma lumin qoyaan qiimo leh, waxaa ugu wanaagsan in mulch.
Inta badan "Dhunkashada Geranium" waxaa lagu beeray qaab ah geedo la dhammeeyey. Waxaa ugu wanaagsan in ay ku koraan geedo sidoo kale madaxbannaan, oo aan la iibsan - kiiskan waxaa jiri doona damaanad ah in dhammaan xaaladaha horumarka caadiga ah iyo fruiting ee yaanyada waa la dhammaystiray.
Waxaan kugula talineynaa in aad la tashato sifooyinka beeritaanka yaanyo sida waafaqsan qaabka Terekhins.
Abuurka iibsaday ee horay loo daaweeyay dhammaan hababka lagama maarmaanka uma baahna in la diyaariyo loona qooyo, haddii kale lakabka lidka ilaalinta ee walxaha waxtar leh ayaa waxyeelleyn kara iyaga. Nuqul shakhsi ahaaneed ayaa loo baahan yahay in la diyaariyo:
Miro aad u qoyan oo lagu qooyey xalal gaar ah waa mid aan loo baahnayn si aan wax u yeelin. Marka ugu horeysa, waxaa fiican inaad ku rido biyaha kulul (40 ° S) 3-4 saacadood.
Ka dibna miraha waxaa loo diraa xal 1% oo ah kiniinka potassium (1 g halkii 100 ml oo biyo diirran ah) nus saac. Waxaa lagama maarmaan ah in jeermiska iyo baabi'iyo cudurada fungal. Intaa waxaa dheer, daloolka potassium saturates abuurka leh manganese iyo potassium, taas oo lagama maarmaan u ah koritaanka.
Marxaladda ugu dambeysa, miraha waxaa lagu qooyay biostimulator, kuwaas oo hadda aad u badan. Qodobka xalka iyo wakhtiga nasashada ayaa lagu tilmaamay tilmaamaha.
Geedo yaanyo ah ayaa lagu kori karaa qaabab aad u xiiso leh - dabayl, laakiin marka hore waa in ay ku dhalataa waraaqda musqusha.
Seeds waxay diyaar u yihiin beeritaanka. Beerta qaar ka mid ah ayaa sidoo kale ku shaqeynaya biqilka abuurka on suufka qoyan ee qoyan.
Si aad u beerto miraha oo barara ama ubax leh, weel kasta oo aad ku shubi karto ciidda gaarka ah ee yaanyada. Kuwani waxay noqon karaan koobab balaastig ah ama sanduuqyo, dhalooyinka quraaradaha ama sanduuq alwaax ah. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la diyaariyo filim caag ah ama bacaha si loo daboolo miraha oo loo abuuro aqalka dhirta lagu koriyo.
Seeds si fiican ayuu ufilan doonaa meel diiran, iyo marka sprouts muuqdaan, waxay u baahan doonaan iftiin badan - dad badan ayaa hagaajin doona daaqadahan taas oo ku jirta guryahooda. Si geedo si ay u helaan iftiin ku filan, waxaa lagula talinayaa in sanduuq loo dhigo meel u dhow daaqada dhinaca qorraxda.
Waa inaad fulisaa talaabooyinka soo socda:
Qoyso dhulka hoostiisa si aaney qoyan ahayn.
Samee qaboojin (sanduuq) ama guntamo (koobab) carrada qoyan qoto dheer 1 cm.
Nidaamka degitaanka: 2 × 3 cm (sanduuq) ama 2 × 2 cm (koobabka).
Si taxadar leh u dhig miraayadaha godadka loo diyaariyey. Badeecooyinka la daabacay waa in lala qaataa cambeereerka, ma aha gacmo, si aan u waxyeeleynin sprouts sprouted.
Daadi abuurka dusha sare ee dhulka oo daboolo weelka oo dhan oo leh filim ama boorso, sidaas darteed samaynta aqalka dhirta lagu koriyo oo yar.
Sanduuqa ku rid meel diirran oo dulqaado.
Daryeelka geedo la beeray wuxuu ka kooban yahay talaabooyinka soo socda:
filimka waa in laga saaraa sanduuqa ka dib soo baxa caleemaha, halka ay tahay in ay istaagaan on kolka daaqada qoraxda;
waraabinta waa lagama maarmaanka maadaama ciidda ay xoqdo, laakiin ha buuxin;
waxaad u baahan tahay inaad quudiso geedo ku jira koobabyo kala duwan oo caag ah oo leh awood ah 0.5 litir, marka ay jiri doonto 2-4 caleemo run ah;
bacarimiso qaab foomka daciif ah ee bacriminta macdanta waa inay ahaataa laba jeer ka hor inta aan la beddelin;
Waa lagama maarmaan in la adkeeyo geedo ka hor intaan lagu beerin dhul furan, keenaya balakoonka ama dibedda cimilo wanaagsan.
Baro sida iyo goorta la beero geedo yaanyada dhulka ku furan.
Si aad u beeri geedo ee dhulka u furan waa suurto gal kaliya oo kaliya ka dib markii dhaxan habeenkii. Heerkulka hawada habeenkii waa in uusan hoos u dhicin + 15 ° C. Ka dib markaad beerto, waxaad u baahan tahay inaad ku hayso daboolka filimka haddii heerkulku habeenkii yahay + 14 ° C ama ka hooseeya. Qaadida qaliinka waa ugu fiican qadada ka dib. Dhiiggu wuxuu diyaar u yahay in uu ku tallaalo marka ay timaaddo ubaxa koowaad.
Waa muhiim! Haddii aad uur leedahay, oo ay duurka u buuxsamaan taangiyada yaryar, koritaanka daaqsintooda ayaa joojin kara.
Transplantation waxaa lagu sameeyaa nidaamka soo socda:
Saddex maalmood ka hor waxay joojisaa fuuq-biyoodka.
Goobaha qorraxda qorraxdu waxay sameeyaan sida waafaqsan nidaamka: afar baadiyaha halkii mitir labajibbaaran, qoto dheer waa in uu ka weyn yahay dhererka koobiga kaas oo dhirta la qaado.
A substrate for yaanyada iyo qaado oo ah superphosphate waxaa lagu shubay galay grooves.
Buuxi godadka biyo iyo, ka dib markaad sugeysid nuugid buuxda, ku celi dhowr jeer.
Sprouts leh ubax hore u si tartiib ah u qoto dheer oo dhulka jiifa.
Mar labaad, biyo si fiican u biyo diirran oo u sii daaya waraabinta xiga toddobaadkii.
Waxaan kugula talinaynaa inaad barato sida iyo sida loo abuuro geedo yaanyo.
VIDEO: KA BEDDELIDA TALOOYIN KA QAYBGALA DALKA
Gobollada koonfureed, oo ah xilliga xagaaga waa xilli hore oo diiran, "Dhunkashada Geraniums" ayaa lagu beeray isla markiiba dhulka hoostiisa, iyada oo aan korin geedo ka hor. Tani waxay badbaadineysaa wakhti iyo dadaal. Laakiin sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad raacdo farsamada saxda ah.
Doorashada meesha loogu talagalay sii kordhaya "Gacanium Kiss" - aqalka dhirta lagu koriyo ama beerta - waxay kuxirantahay dhulalka iyo saadaasha hawada. Gobollada waqooyi, oo leh xaga gaaban iyo qabow, yaanyada waxay kori doonaan oo dhalinayaan oo kaliya in lagu koriyo ah: hawada u furan, waxay si fudud uma yeelan doonaan waqti ay u bislaadaan. Meelaha koonfureed waxaad si ammaan ah ku beeran kartaa beerta ama dalka - aaggan dhulku waa diiran yahay guga. Xaaladdaas, haddii ay saadaalinta cimiladu saadaaliso xilliga xagaaga ama roobabka iyo qaboobaha, ka dibna tamaandhadu wali waxay ku raaxeysanayaan xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo.
Under yaanyada ee beerta aad u baahan tahay inaad doorto goob qorrax leh, laakiin waa lagama maarmaan in ay ka xiran tahay dabaylaha woqooyiga. Ilaalinta noocan oo kale ah waxay noqon kartaa xayndaab, derbi aqalka dhirta lagu koriyo ama guriga. Ha iloowin inaadan beeran karin abuurka yaanyada, halkaasoo ay hore u koray, ama baradho ka dib, basbaaska, eggplant iyo digir. Dhamaantiisba waa qeyb ka mid ah dhulka la bacrimiyey iyadoo humus ilaa xilliga dayrta. Faa'iidada aqalka dhirta lagu koriyo - abuurka waa la beeray karaa hore, sidaa daraadeed, dalagyada dalagga horay uga baxsan. Faa'iidada dhulkuu furan yahay ayaa si dabiici ah loo adkaadey, duurka ayaa xoog badan, xooggan oo aan jiraneyn, iyo midhaha ayaa ah kuwo dhadhan.
Si aad u bixiso yaanyada goosashada wanaagsan, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo ma aha oo kaliya dhammaan shucuurada geedo sii kordhaya, laakiin sidoo kale si aad u ogaato waqtiga ugu wanaagsan ee beerashada abuurka.
Bannaanka abuurka ah ee lagu sameeyey Abriil - horraantii May. Waxa ugu muhiimsan waa in dhulka uu hore u kulul yahay. On ku saabsan in pre-qoyaan abuur ah, fikrado kala duwan. Beerta qaar ayaa sheegta in aysan u baahnayn in ay abuuraan biqil ama abuuraan kiciyaasha kobcinta, maxaa yeelay waxay helayaan wax kasta oo ay uga baahan yihiin ciidda si gaar ah loo diyaariyey.
Qaar kalena waxay aaminsan yihiin in ay weli u baahan yihiin in lagu qooyo fangasidaha iyo kobcayaasha koritaanka kaliya sida ay u sameeyaan kahor beerashada abuurka geedo. Xaqiiqdii, iyo xaalad kale, waxaa jira khibrad iyo garasho.
Dabaysha iyo qaboojinta degdega ah lama qabsan karo abuurka qallalan ee dhulka, laakiin waxay ku fariistaan ​​dhulka 8-10 maalmood ilaa caleemaha kowaad. Grooved mashquul ah Gagaab 4-5 maalmood, laakiin waxay u baahan yihiin in lagu beeray oo kaliya dhulka diiran, oo aanay ku noolaan karaa dhibicda heerkulka. Abuuridda abuurka dhulka waa in la sameeyaa sida soo socota:
Diyaarso dhulka dushiisa, taas oo ah, u furfur si aad u jilicsan. Haddii dayrta ee bacriminta aan la fulin, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo ka hor beero - ku dar humus iyo hardwood, iyo sidoo kale peat iyo ciid ama dhadday (ciid ah cufan) iyo qodo. Diyaarsanaanta ama la soo iibsaday substrate ayaa loo adeegsan karaa si kasta oo shakhsi ah.
Ceelasha godka godka ah (1-1.5 cm) sida waafaqsan qorshaha 40 × 60 ama 30 × 50 (haddii la xiiray).
Wanaagsan. Beeraha qaar waxay ku shubaan godadka biyo kulul ama xal daciif ah oo ah kiniinka potassium si loogu nadiifiyo.
Ku rid 3-4 xabo ee dalool kasta, ku dabool carrada oo is dulqaad yar. Carrabka qoyan maaha mid u baahan biyo.
Ka dib muuqaalka 3-4 caleemo, waxaad u baahan tahay inaad doorato sprouts ugu xooggan, oo ka saar nasashada daloolka, waad u-beddeli kartaa.
Marka la eego waraabinta, fiiro dhawr dhibcood:
Isla markiiba beeridda, sariiro aan la waraabin karin ilaa caleemaha soo muuqan, haddii kale dhulka ayaa qaadan doona qolof ah, kaas oo sprouts ay adkaan doonto in la jebiyo;
waxaad ku waraabin kartaa oo keliya biyo diirran (+ 23 ° S), oo ay ku jirto biyaha roobka;
Tani waa in la sameeyo kaliya subaxdii ka hor qorraxda dhalaalaya ama fiidkii;
waraabinta waa inaysan noqonin kuwo soo noqnoqonaya: hal mar isbuuc toddobaadkii aan ubax lahayn iyo laba jeer toddobaadkii marka ay ubaxayaan;
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu shubo biyaha si ay xididada si fiican u lakulmaan iyo baadiyaha ay weli qalalan tahay;
Xulashada waraabinta ku habboon waa faleebo, taas oo gacan ka geysaneysa ilaalinta qoyaanka ciidda dhexdhexaadka ah;
ee xaaladaha xagaaga oo qallalan iyo biyo kulul, waa in biyuhu ay noqdaan kuwo ballaadhan oo dherer leh, iyo waraabinta waa in la yareeyo cimilada roobka.
Baro inta jeer ee aad u baahan tahay inaad biyo ku yareeyso yaanyada beerka furan iyo aqalka dhirta lagu koriyo.
Sida noocyo kale oo yaanyo ah, Dhunkashada Geranium waxay u baahan tahay dabacsanaan iyo jaridda dhirta: xididdadiisa waxay u baahan tahay ogolaanshaha bilaashka ah ee hawada iyo qoyaanka. Way adagtahay haddii lakabka sare ee dhulka uu daboolo qolof qallalan. Waxaa suurtagal ah in la bilaabo si loo dabciyo sariiraha leh yaanyada ka dib markii caleemaha oo dhan ay muuqdaan. Nidaamka waa in la sameeyaa labadii toddobaadba mar.
Sidoo kale, hadba sida ugu muhimsan, waxaad u baahan tahay inaad caleenta ka saarto xididada. Waa muhiim in la sameeyo sida ugu dhakhsaha badan ee ay u muuqdaan, si aanay u oggolaan inay koraan. Cawska cawska ah ee goobta waa in aanu noqon, maxaa yeelay waxay ka hortagtaa koritaanka caadiga ah ee tomato dhaqameedka iyo gacan ka geysta horumarinta cuduro kala duwan.
Khabiiradu waxay ku talinayaan shaqada beerta in ay adeegsadaan fokin-fiisaha. Qalabkan Tani waxay gacan ka geysan doontaa in la dabciyo dhulka oo si fiican u daadi.
Baro naftaada adigoo isticmaalaya cutubka Fokin daaraha ee beerta, sidoo kale baro sida loo sameeyo fikradan naftaada
Maaskaga iyo qoryaha
Tan iyo "dhunkashada Geranium" waxaa loola jeedaa noocyada kala duwan, waa sahlan tahay in la daryeesto marka loo eego yaanyo kale. Sababta oo ah duurka sare ee koritaanka uma baahna in la xoqdo iyo xiro. Beeraleyda qibrada leh waxay xitaa kugula talinayaan inay ka baxaan 3-4 caws dhoobo ah si ay u helaan goosashada wanaagsan.
Laakiin hoose hoose ee caleemaha hoos ugu ridaan waxaa si xoog leh lagula talinayaa in laga saaro inta lagu jiro muddada geedka miro. Tani waa cabitaan nadaafadeed: waxay hagaajinaysaa hawo ka baxsan baadiyaha waxayna ka hortagtaa horumarinta cudurrada. Tan iyo markii lagu koriyo "Geranium Kiss" ayaa kor u kacda (1-1.5 m), beeralayda qaarkood waxay tixgeliyaan in ay lagama maarmaan tahay in la xiro laamaha ilaa taageerada.
Daryeel wanaagsan waxaa ugu muhiim ah bacrinta. Marxaladda ugu horreysa, waa in la istacmaalaa kiciyaasha kobaca ee kusalaysan tilmaamaha. Doorashada daawooyinkan waa mid aad u ballaaran. Si kicin koritaanka ee yaanyada waxay u baahan yihiin laba jeer oo kaliya: wakhtiga beergooyska iyo marka caleemaha muuqanayaan.
Intaa waxaa dheer, in muddooyinka kala duwan ee horumarinta, yaanyada waxay u baahan yihiin macruufka kala duwan: nitrogen waxaa loo baahan yahay inta lagu jiro koritaanka daaqsinka, iyo in badan oo potassium ayaa loo baahan yahay inta lagu jiro ubax iyo Bisaylkiisa ee miraha. Waxa kale oo jira baahi loo qabo waxyaabo ay ka mid yihiin: kalsiyum, magnesium, boron, birta, manganis, naxaas iyo zinc. Dhammaan nafaqooyinkaas oo ku jira tirada saxda ah waxay qayb ka yihiin bacriminta macdanta kakan ee tamaandhada. Waxay u baahan yihiin in la sameeyo toban maalmood oo kasta.
Nidaamka asaasiga ah "Geranium Kiss" wuxuu leeyahay mid ka mid ah waxyaabaha gaarka u ah: wuxuu ku koraa xayawaan aad u badan sida ballaaran, adigoo qaadanaya meelo badan oo dhulka hoostiisa ah. Ogaanshaha tani, waxaa lagula talinayaa in ay biyo u helaan xal nafaqo ah oo keliya maahan duurka, laakiin sidoo kale sariirta oo dhan gebi ahaanba.
Baro sida loo sameeyo yaanyo yaanyo ah.
"Kiss Geranium" ayaa leh difaac wanaagsan. Sababtoo ah xaqiiqda ah in tani ay tahay kala duwanaansho hore, wuxuu u shaqeeyaa otplodonosit oo aan lagu qaadsiin badanaaba cudurka "yaanyo". Sidaa darteed, isagu kama baqayo dabaylo goor dambe, fusarium, xayrta maqaarka iyo verticillis. Laakiin, nasiib daro, isagu ma laha iska caabin cudurada bakteeriyada.
Si loo yareeyo halista cudurka, haddii aad u hogaansamayso dhammaan tallaabooyinka kahortagga:
miraha ka hor intaan laga beerto fungicides;
geedo lagu beerayo dooran kaliya kan ugu xoogga badan oo caafimaad leh;
hagaajinta difaaca duurka ee leh hab gaar ah (1 jeer xilli ciyaareed);
wakhti ay ka soo saarto caws, caleemaha hoose ee duurka yaanyo iyo gebi ahaanba ka saaro haraadiga beerta.
Haddii, si kastaba ha ahaatee, cudur bakteeriyadeed ayaa soo muuqday, waxaa laga adkaan karaa fungicides iyo Fitolavin-300.
Haddii dhammaan shuruudaha daryeelka si habboon loo ilaaliyo, waxaa suurtogal ah in la beero dalagga saddex bilood ka dib soo bixitaanka geedo. Fruiting waxay dhacdaa 2-3 jeer xilli ciyaareed. Miraha waxay u baahan yihiin inay helaan waqti ay ka soo baxaan duurka ka hor bilawga ah cimilada qabow, haddii kale waxay si dhakhso ah u sii xumaanayaan.
Waxaad u baahan tahay inaad kalluunka ku karsato hal mar adigoo buraashaya, waxaad la socon kartaa burush. Waa inaadan sugin fayaq buuxa oo ku saabsan laanta: khabiirada waxay ku talinayaan in ay ku dhuuntaan miraha cagaaran iyo kuwa cagaarka leh. Yaanyada la gashaday waxaa la dhigayaa sanduuq alwaax ah 2-3 layers. Iyaga u dhexeeya iyaga gelin laba ka mid ah casaan, buuxa yaanyada bislaado, taas oo ka ciyaari doona doorka kiciya. Xaaladahaas oo dhan, yaanyada oo dhan si dhakhso ah u dhaqdhaqaaqa (ka dib qiyaastii hal usbuuc) iyo waqti isku mid ah.
Yaanyada bislaado ma noqon doonaan kuwo been ah muddo dheer. Si aad u sii dheeraato muddo dheer, waxaad u baahan tahay inaad u dirto miro ku jirta qaboojiyaha. Yaanyada cagaaran waxay ku dhejisan karaan waqti dheer Maqsin heerkul ah + 10 ° C Qaar badan oo xaflado ah oo loogu talagalay kaydinta dheer ee miro "dhunkashada germanyar" waxay qaboojinayaan, qallajinayaan oo ilaalinayaan.
Inta lagu jiro koritaanka daaqsinka, ubaxyada iyo ubaxyada "Kiss Geranium" waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican. Ujeedooyinka loo qurxiyo, waxay ku koraan dheryaha ubaxa. Si ay baadiyaha si ay u sii wataan quruxsan, waxaa muhiim ah in la beero geedo ee dhererka size size: ugu yaraan 5-8 l.
Markaad isticmaasho kiciyaha kobcinta kicinta, saameynta soo horjeeda waxaa mararka qaarkood lagu arkaa, maxaa yeelay noocyada phytohormones kala duwan ayaa ku jira alaab kala duwan. Daawooyinkaasi waa in loo isticmaalo kaliya sida ku qoran tilmaamaha.
"Dhunkashada geraniums" waa mid cusub oo ka mid ah noocyo yaanyo, laakiin iyada oo ay uga mahadcelinayso sifooyinka wanaagsan, waxay horey u suurtagashay in ay hesho jawaab celin badan oo laga helo dadka beeralayda khibrad leh.
Video: Tamaandho noocyo kala duwan leh
Sannadkan waxa kale oo uu ku koray "dhunkasho ah", ma niyad jabin. Tamaandhada quruxda badan iyo dhadhan fiican, midho badan. Si ka duwan noocyo badan oo kale koray ee lagu koriyo, wuxuu ahaa ma jiran verschinkoy. Seeds sidoo kale iibsaday Gusev.
My Kiss Geranium ka Kulik ka Ukraine. Qeexitaankiisu waa dhir leh foostooyin waaweyn (ilaa 100 ugxan), ubax geedka, miraha 0.30 g, oo lagu daboolay faashad, casaan. Og iyo aqallada lagu koriyo. Runtii, noocyada kala duwan waa mid aan loo siman yahay, dhammaan sifooyinka isku xira ... Waxaan haystaa dhowr duurka - baaldiyada gaaska qiiqa. Heerka duurka waa 0.6-0.7 m. Dhadhamin miraha - macaan, cufan, udifaac.